Mpamily taxi iray, hita faty tao anatin’ny fiarany ihany, teny amin’ny By Pass ny alahady teo. Feno ra tao anaty fiara, ary nahitana diana kapoka teo amin’ny lohan’ilay mpamily. Tsy fantatra izay namono, fa olona nandalo ny nahita azy niankohoka tao. Noheverin’ny olona fa maty noho ny orana sy hatsiaka izy io, kanefa rehefa nozahana, hay olona maty novonoina ny tao. Efa nikaroka azy ity ihany koa ny havany, saingy tsy nanampo ity toe-javatra ity. Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny fandihadiana rehetra. “Mety ho jiolahy nandeha tao anaty fiara ny namono azy”, hoy ny olona teny an-toerana.
Notafihina dahalo maromaro nirongo fitaovam-piadiana ny tanàna iray antsoina hoe Andronorona, fokontany Beadabo Ambatondrazaka, ny zoma lasa teo. Omby 28 lasan’ireo olon-dratsy. Nifandona ny dahalo sy ny fokonolona taorian’izay ka maty voatifitra tamin’izany ny olona iray. Tonga tany an-toerana ny zandary nanampy tosika ireo fokonolona manao ny fanarahan-dia ireo dahalo. Anisan’ny mahazo vahana amin’ny asan-dahalo indrindra ireo faritra ambanivohitra, ny asan-dahalo any Ambatondrazaka sy ny manodidina.
Latsaka tampoka avy eny ambony traktera ny olona iray, nandeha tamin’io ihany ka voahitsaky ny “remorque”. Maty tsy tra-drano izy io, noho izany, tany Ambatoharanana Ambavan’Ankarana, Ambilobe, ny alahady teo. Traktera nitondra razana ihany koa izy io, ka noho ny haratsian’ny lalana ny nahatonga ilay fianjeran’ny olona iray. Nialana nenina nentina tany amin’ny toeram-pitsaboana ihany, saingy tsy tana ny ainy.